Telefishinkii ama Taalaadii dunida ugu dhirirka badneed oo xariga laga jaray ,xagee ku taal ? (Daawo Muuqaal+Warbixin) - iftineducation.com
iftineducation.com – Magaalada Tokiyo ee caasimada dalka Japan waxaa laga furay Telefishinkii Caalamka ugu dhirirka badnaa kaas oo loogu magac daray The world’s tallest tower and Japan’s biggest new landmark (Tokyo Skytree).
Telefishinkaan ayaa waxa uu si toos ah u soo qaban doonaa Wararka ay tabiyaan dhamaan Telefishinada Caalamka waxaana dhirirka Taalada Telefishinkaan lagu sheegay 634 Mitir.Tv-gaan oo loogu magac daray Tokyo Skytree waa kii ugu horeeyay uguna dhirirka badnaa ee laga furo gudaha dalka Japan.
Shacabka dalka Japan ayaa maalin kasta iskugu soo baxa goobta laga taagay Taalada Telefishinkaan waxeeyna ku galaan halkaas Sawiro Taariikhi ah . Sidoo kale Taaladaan Casriga ah dusheeda waxaa heeso ku dul qaaday Fanaaniinta ugu caansan gudaha dalka Japan .
Taaladaan ayaa waxaa la sheegay inay ka dheer tahay kaliyah Taalada ku taal magaalada Dubai ee lagu magacaabo Burji Khalifa waxaana Caalamka looga qiray taaladaas tan ugu dheer Dunida (Burj Khalifa is the tallest building in the world).
Daawo Muuqaalka Taaladaan qeeybta 1-aad
Halkaan ka Daawo Muuqaalka Taaladaan qeeybtii 2-aad